UHlomuka ukhuthaze ukuphepha kwabafundi nothisha esimweni sezulu – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU Sipho Hlomuka ocela abafundi nothisha baqaphele isimo sezulu.
UNGQONGQOSHE woMnyango wokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal uMnu Sipho Hlomuka unxuse abazali ukuba babe mehlo made ezinganeni zabo bazibheke ikakhulukazi lezo eziwela imifuna njengoba sekuvulwe izikole.
UMnu Hlomuka uxwayise kanjena kulandela ukumuka kwabantu ababili abebewela umfula uThukela obeludla izindwani phakathi kwaseKranskop naKwaMaphumulo ngaphansi kwesifunda seLembe. Ngokwemibiko kuvela ukuthi kumuke owesilisa obehamba nengane eneminyaka engu-8 okukhulukala ukuthi izalwa nguyena lona wesilisa abebewela ebhuloweni eliphumela eNkandla okungakacaci ukuthi bamuke kanjani.
Emuva kwalesi sigameko uMnyango wokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu kulesi fundazwe uthumele ithimba longoti elizotakula le mizimba emibili.
Ngokwesitatimende salo mnyango esithunyelelwe abezindaba nguMnu Senzelwe Mzila owukhulumelayo sikuqinisekisile ukuthi likhona ithimba labatshuzi elithunyelwe ukuyobheka. Sibe sesiveza ukuthi uMnu Hlomuka ube esecela abantu ukuba babambisane nabatakuli ngesikhathi besazama ukuthola abaminzileyo. “Sicela abazali nothisha baqikelele ukuthi bayasibheka isimo sezulu njengoba singesihle kulezi nsuku futhi okusalindeleke ukuthi sishubise njengoba sihambisana nemvula enamandla. Sinxusa nabashayeli bezimoto ukuba bashayele ngokucophelele njengoba imigwaqo isuke imanzi izimoto zishelela kalula,” sisho kanje.
Isifundazwe saKwaZulu-Natal kulezi nsuku sihlaselwe yizimvula ezinamandla ikakhulukazi ezifundeni okunguMkhanyakude, eZululand, eKing Cetshwayo (uThungulu) naseLembe.UMnu Hlomuka udlulisa lesi sinxuso nje kule nyanga kuhlasele imvula enamandla eMnambithi ngaphansi kwe-Alfred Duma Municipality lapho idolobha kwabe sengathi lakhiwe edamini njengoba amanzi alimboza kwathikamezeka nokusebenza ezitolo ngenxa yamanzi ayegwele ngaphakathi.